High School Musical ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ။ – SoShwe
Home/Entertainment/High School Musical ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ။
Disney Channel ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ High School Musical ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်(သရုပ်ဆောင်)တွေဟာ အခုချိန်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ငယ်ရုပ်လေးပျောက်ပြီး တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ ရုပ်ရည်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
High School Musical ဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Troy Bolton အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Zac Efron ဟာ နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ The Greatest Showman နဲ့ Baywatch ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၂။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Troy Bolton ရဲ့ချစ်သူ Gabriella Montez အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Vanessa Hudgens ဟာ Netflix ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Princess Switch ဇာတ်ကားနဲ့ The Knight Before Christmas ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။
၃။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Chad Danforth အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Corbin Bleu ကတော့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Kiss Me Kate” ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၄။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Sharpay Evans အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Ashley Tisdale ဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း တွဲဖက်လုပ်ရင်း Illuminate Cosmetics လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်နေပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ အဆိုတော် Christopher Knot ကို လက်ထက်ခဲ့ပါတယ်။
၅။ High School Muscial ဇာတ်ကားထဲမှာ Ryan Evans အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Lucas Grabeel ကတော့ Family Guy ၊ Pinky Malinky နဲ့ Elena of Avalor စတဲ့ Animated ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ နေရာမှာ အသံထွက်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
၆။ High School Musical ဇာတ်ကားထဲမှာ Taylor McKessie အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Monique Coleman ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Dancing with the Stars ဆိုတဲ့ အကပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်မှာ သူမရဲ့အကစွမ်းရည်ကို ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး စတုတ္ထနေရာကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Monique ဟာ အခုချိန်မှာတော့ Gimme Mo လို့ အမည်ရတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာ ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၇။ High School Musical ဇာတ်ကားထဲမှာ Kelsi Nielson အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Olesya Rulin ကတော့ “The Mentalist” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး “SEAL Team” လို့ အမည်ရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုမှာလဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၈။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Martha Cox အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Kaycee Stroh ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Shaptown,USA” ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Kaycee ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို သိပ်မမြင်ရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “High School Musical : The Musical” ဇာတ်ကားထဲမှာ ပြန်လည်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၉။ High School Musical ဇာတ်ကားမှာ Ms. Darbus အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Alyson Reed ကတော့ အခုချိန်ထိ အနုပညာလောကထဲမှာ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “Ad Astra” ဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာကို မြင်တွေ့ရမှာပဲဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Kylie Jenner ??? ????????? ???????????? ????????????????????
Next မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ ဟာသမင်းသားကြီး Jack Black ရဲ့ အကပါရမီ။